ग्यास्ट्रिकको स*मस्याले स*ताएको छ ? झु*क्किएर पनि नखानुस् यस्ता खानेकुरा – Suchana Hub
ग्यास्ट्रिकको स*मस्याले स*ताएको छ ? झु*क्किएर पनि नखानुस् यस्ता खानेकुरा
काठमाण्डौ । ग्या* स्ट्रिकलाई नेपालमा ‘राष्ट्रिय रो* ग’ संज्ञा दिइएको छ । “भनिन्छ हरेक नेपालीलाई ग्या* स्ट्रिक छ ।” विशेषगरी ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसलाई मात्र यो रो* ग लाग्नुपर्ने हो तर, अहिले सबै उमेरका मानिसमा यसको स* मस्या देखिने गरेको छ । खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्या*स्ट्रिकको स* मस्याले सताउने गर्छ । ग्या* स्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सु* न्निनु र ग्या* स ब* ढ्नु भन्ने हुन्छ । यस्तो स* मस्या भएमा पेट फु* ल्ने, हावा भ* रिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नप* च्ने, लामो समय नखाँदा पेट पो* ल्ने, खान मन नलाग्ने तथा ढ्या* उ आइरहने लगायत स* मस्या हुन्छन् । यसका साथै यसले यति मात्र नभई पा* चन प्रणालीमा पनि बा* धा उत्पन्न गराउँछ जसले गर्दा शरीरमा र* गत र क्याल्सियमको क* मी हुन जान्छ ।
यसको समयमै उपचार नगरेमा पेटको अ* ल्सर र क्या*न्सर नै हुन सक्छ । त्यसैले ग्या* स्ट्रिक भएका व्यक्तिले खानपानमा विशेष ध्या* न दिनुपर्छ । तर, सबै पेट दुखाइको कारण ग्या* स्ट्रिक हुँदैन । खानाको स* न्तुलन नमिल्दा पनि पेट दुख्छ र पेटमा ए* सिड हुन्छ, जसले गर्दा पा* चन प्रणालिमा सहयोग पुर्‍याउँछ । पेटमा ए*सिडि*टीको मात्रा बढी हुँदा ग्या* स्ट्रिकको स* मस्या आउछ । बजारमा पाइने च* क्की या तरल औषधिले ए*सिड नि* यन्त्रण गर्छन् र केही समय आ* राम पनि महशुस हुन्छ तर पनि हामीले आफै पनि यस विषयमा ख्या* ल राख्नुपर्ने हुन्छ। चिकित्सकीय भाषामा ग्या* स्ट्रिकलाई ‘ए* सिड पे*प्टिक डि *सअ*र्डर’ भनिन्छ । पेट दु*ख्ने वा हल्का अस* हज महशुस भएलगत्तै ग्या* स्ट्रिक भयो भन्दै अस्पतालतिर दौ* डिन आवश्यक छैन ।
ग्या* स्ट्रिक र अ* ल्सरका का* रणहरू : धु*म्रपा*न, खै* नी, सु* र्तिजन्य पदार्थ उच्च मात्रामा प्रयोग गर्नु – पे* न कि* लर तथा बाथ रो* गसँग सम्बन्धित औषधिहरू धेरै सेवन गर्नु – चटपटे, पानीपुरी, पिरो चाउचाउ तथा अ* जिनोमो*टो हालिएका खानाहरूको अधिक प्रयोग गर्नु यदि तपाइलाई पनि ग्या* स्ट्रिकको स* मस्या छ भने भु* लेर पनि यी खानेकुरा नखानुहोला:- ग्या* स्ट्राइ*टिस भएका व्यक्तिले कागती, सुन्तला, निबुवा, भोगटे आदि ए* सिडिक खाने कुराको प्रयोग गर्नुहुँदैन । यस्तो स* मस्या भएकालाई टमाटरले पनि थप अ* सर पु-याउँछ । टमाटरमा पनि ए* सिडिक हुने भएकाले गर्दा ग्या* स्ट्राइ*टिसले दिने पी* डालाई बढोत्तरी गर्छ । कसै–कसैले यसको थोरै प्रयोगले त्यति अ* सर नगर्ने भए पनि खाँदै नखानु उत्तम मानिन्छ।
नियमित रूपमा म* दिरा से* वन गर्दा पनि ग्या* स्ट्राइटि* सको अ* सर झन् बढेर जान्छ । तर, केही अध्ययनले भने दिनहुँ थोरै मात्रामा पिउँदा ग्या*स्ट्राइ* टिस हुनबाट जो* गाउने देखाएको छ । ग्या*स्ट्रि*कको स* मस्या भएकाले दूध र दूधजन्य पदार्थ पनि प्रयोग नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । दूधमा हुने प्रोटिनले पेटको भित्री भाग सु* न्निन्छ भने यसका साथै यसले पेटमा ए* सिडको मात्रा पनि बढाउँछ । तर, दही भने फाइदाजनक हुन्छ । यसमा पाइने प्रोबायोटिकले भने रोगीलाई रा* हत प्रदान गर्छ । यद्यपि, दहीको प्रयोग गरेर त्यसले राम्रो गरे मात्र नियमित से* वन गर्नुपर्छ । ग्यास्ट्राइटिसबाट पी* डित मानिस चिया र कफीबाट पनि ब*च्नुपर्छ ।
चियापत्ती र कफीमा हुने क्याफि* नले ग्या*स्ट्राइ* टिसको अ* सरलाई बढाउने काम गर्छ । ग्रिन–टीको सेवनले भने ग्या*स्ट्राइ* टिसको सम्भावना ४० प्रतिशत कम गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ग्या* स्ट्राइटि* सको स* मस्या हुने मानिसले म* सलेदार खानेकुरा नखानु नै राम्रो हुन्छ किनभने यस्ता खाने कुराले ग्या*स्ट्रि*कको स* मस्यालाई झन् ब* ल्झाउने काम गर्छ । नेपालीले पछिल्लो समय प्रशोधित खानेकुराको अत्यधिक प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, यस्ता खानेकुराले ग्या* स्ट्राइटि* सको स* मस्या झन् बढाउने गर्छ । त्यसैले गर्दा सेतो पाउरोटी, पास्ता, चिनीयुक्त खाद्यपदार्थ (चिसो पे* य प*दार्थ, इ*नर्जी ड्रिं*क्स), प्र* शोधित वनस्पति तेल, तेलमा तारिएका खानेकुरा, प्र* शोधित मासु (ससेज, ह्याम), ट्रान्स फ्या* टलगायतका खानेकुराको प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
ग्यास्ट्रिक हुँदा के नखाने ? रातो मासु, सु* ख्खा खानेकुरा, पिरो र अमिलो अचार, खुर्सानी, अमिलो दही, प्रशस्त तेलमा ता* रेको माछा र मासु, पकौडा, समोसा, चाउमिन, मःम, मालपुवा, कफी, चकलेट, चना, केराउ, अमिलो कागती, फलफूल, दूध चिया र चिसो पे* य प*दार्थ कोक, फ्यान्टा, पेप्सीबाट टाढै रहने । ग्या* स्ट्रि*क र आईबीएस अलग-अलग रोग हुन् । दुवैको लक्षण उस्तै हुने कारणले भिन्नता छुट्याउन सकिँदैन । कहिलेकाहीं आईबीएस हुँदा पनि ग्या*स्ट्रि* क भएको अनुमान गरिन्छ र जाँ*चबु* झ नै नगरी आईबीएस भएमा पनि ग्या* स्ट्रिककै औषधि खाने चलन पनि छ ।
Previous नेपालको यो एयरलाइन्सका पाइलट र एयरहोस्टेजलाई कोरोना पुष्टि, प्रहरी अस्पताल भर्ना गरियो [को हुन् त]
Next दुखद खबर : फेसबुक लाइभ गरेर दुइ युवतीद्धारा देहत्याग लाईब (भीडीयो सहित)